Home » Myanmar Gazette » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – သြဂုတ် ၂၀၁၅
Photo: Barack Obama announces plans to cut emissions from US power plants. (Reuters: Jonathan Ernst)
Related Story: Australia’s climate change position leaves others scratching their heads: Al Gore
Audio: No Plan B: Obama announces aggressive climate change action (AM)
California wildfires torch 134,000 acres — and counting
မိုးမရွာ.. ခြောက်သွေ့.. ရေမရှိရတဲ့အထဲ.. မြောက်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယား မီးလောင်ချက်က.. ဧက၁သိန်း၃သောင်းကျော်…။
မြန်မာပြည်ကရေတွေ.. ကယ်လီဖိုးနီးယားရွေ့ပေးလိုက်ဖို့.. မိုးနတ်မင်းကြီး.. Allah, Buddha, Jesus, Krishna တို့ကို တောင်းဆိုချင်..။
ပါဝါပလန့်ဒွေ ၀ုန်းတုန်းက ၀ုန်းပီး ဘာအခုမှ ကျောင်းဆရာဂျီး လဲ….
ဒီလထဲ ကိုယ်ပိုင်မျက်လုံးနဲ့ မှတ်မှတ်သားသား သိတာကတော့
၁) အမှိုက်သိမ်း လှည်းငယ်လေးတွေ
အင်မတန်များလာသဗျ… အရေအတွက်များလာသလား …
ခြံတံခါးဖွင့်ထား အိမ်ရှေ့ ပလပ်စတစ်ခုံချ (ကျော်လည်း လုပ်တယ်) စသည် လုပ်ကြတော့ လုံခြုံရေး ပိုကြောက်ရပါတယ်။
၂) safety & daily goods များ
၃-၅ နောက်ပြီး အိမ်တွေမှာ ဆိုရှယ်ပရက်ရှာ ၀င်ပါတယ်။ လင်ကမယားကို နင့်ဇာတိကျ လှူပြီး ငါ့ဇာတိက ချာတိတ်တွေ လာတော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်တယ် ဟလားတို့။ မျက်နှာချင်းဆိုင်နေတဲ့ လူမျိုး ၂စုရဲ့ အိမ်တွေ
အချင်းချင်း လှမ်းချက်ပြီးတော့ သင်းကသည်လိုလား ငါက သည်လိုကွ ဆိုတာမျိုးတို့..။ အစုံပါပဲ။
ခွက်ကမ်းတဲ့ ဆွမ်းတော်ကျတော့ ကိုယ့်အိမ် ကိုယ့်အထှာနဲ့ ပြောထားဆိုထား (ဆိုက်ကော်လော်ဂျစ်ကယ် ကွန်ထရက်ချုပ်ထားပြီးသား ဘုန်းကြီး ကျတော့) တအိမ် တနေ့ ၃ပါး ၅ပါး ပေါ့ဗျာ ။ သို့သော် ဘုန်းကြီးတွေ ကို ဆွမ်းတနပ်စာ
ရယ်မဟုတ်ပေမယ့် ဆန်တဇွန်းထက်တော့ ပိုတယ်မဟုတ်လား။ အဲ့ဒါမျိုး … ကျုပ်လည်း မပြောပြတတ်တော့ဘူး။
အလှူခံ ကိစ္စတော့ ဒီလောက် အသေးစိတ် အခုမှ သိတော့ တယ်။
Final ကျ ပြုတ်မလားမသိ။ အဲဒီမှာ အိမ်လုံးကျွတ်မှ စာရင်းမပါတာ။
ထားတော့။ ကိုယ့်ဘက်က တော့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားတော့ ကြည့်ရမှာဘဲ။
အရေးထဲ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စ အရင်လာပြောနေတယ်….
မစ္စတာ ပရဲစီးဒန့် ရဲ့ မိန့်ခွန်း ကို မနေ့က တွေ့တယ်။
Wira Thu added 42 new photos — with Bhikkhu Bodhi.
ဆည်ဆောက်လို့.. ရေပိုလွှမ်းတယ်လို့ပြောသူတွေကို.. အံ့သြမိတယ်..
ယူအက်စ်မှာ.. အခြေခံဥပဒေကိုစပြင်တော့.. ပထမဆုံးလုပ်ကြတာက.. သောမတ်ဂျင်ဖာဆင်ရေးတဲ့..”wall of separation between church and state”) ပဲ..။ ချခ်ျဆိုတဲ့ ဘာသာရေးဘုရားရှိခိုးကျောင်းနဲ့.. စတိတ်လို့ခေါ်တဲ့..နိုင်ငံကို.. တံတိုင်းခြားခွဲပစ်ရတာပဲ..။
ဒီမှာ က ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးတွဲနေတာ နှစ်ပေါင်းကြာပြီ
Forecasted river levels (4 Aug)
သမ္မတဦးဆောင်သည့် အစိုးရအဖွဲ့ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး ယနေ့ကျင်းပမည်ဟုဆို
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ နေပြည်တော်၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်ရှိ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရုံးချုပ်ကို ရဲများဝန်းရံသည်ဟု သတင်းထွက်ပြီးနောက် သြဂုတ် ၁၃ရက် နံနက် ၈နာရီခန့်တွင် သမ္မတဦးဆောင်သည့် အစိုးရအဖွဲ့ အထူးအရေးပေါ် အစည်းအဝေး ခေါ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရုံးချုပ်နှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
အထူးအစည်းအဝေးတွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း နှင့် ပါတီ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင်သိမ်းကို ဖိတ်ကြားထားခြင်း မရှိဟု သိရသည်။
သြဂုတ် ၁၂ရက် ညပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ရုံးချုပ်ကို ရဲများ ဝန်းရံသည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဒုဝန်ကြီးများကို ည ၁၀နာရီခန့်တွင် ဘတ်စ်ကားတစ်စီးဖြင့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ရုံးချုပ်သို့ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ည ၁၂နာရီခန့်တွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)မှ VIP ကားတစ်စီး ရုံးချုပ်ရှေ့ ရောက်ရှိလာပြီး နှစ်ပေခန့်ရှိသည့် အထုတ်တစ်ထုတ်ကို ဂိတ်ပေါက် လုံခြုံရေးကိုပေးကာ ပြန်ထွက်သွားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရုံးချုပ်ထဲတွင် သြဂုတ် ၁၃ရက် နံနက် ၁နာရီကျော်ကတည်းက တွေ့နေရသည့် အိမ်စီးကားနဲ့ ရဲကားများအနက် ရဲကား ၂စီး နှင့် လူစီးကား ၆စီးခန့်သည် နံနက် ၂နာရီကျော်တွင် ရုံးချုပ်ထဲမှ ပြန်ထွက်သွားကို တွေ့မြင်ရသည်။ နံနက် ၃နာရီတွင် အိမ်စီးကားတစ်ဦး ရုံးချုပ်အတွင်းမှ ထပ်မံ ထွက်သွားသည်ကို တွေ့ရမြင်ရသည်။
ယခု (၀၃:၀၀နာရီ)အချိန်ထိ ရုံးချုပ်ထဲတွင် ရဲကားနှစ်စီးရှိနေတာကို မဇ္ဈိသတင်းထောက်က မြင်တွေ့ရပြီး လူစီးကားတစ်ချို့လည်း ရှိနေပါသေးသည်။
နံနက် ၀၁:၀၀ နာရီခန့်က ပါတီရုံးချုပ်ရှေ့ စစ်ကား သုံးစီးဖြတ်မောင်းသွားပြီး ရဲကား ၄စီးခန့်လည်း ရုံးချုပ်ရှေ့က လမ်းပေါ်တွင် နှစ်ကြိမ်တိတိ ဖြတ်မောင်းသွားခဲ့သေးသည်။
မန်းမန်း – စာဖတ်သူကြီး ယုံကြည်သူမို့ ဖွတ်ချုပ်ဖြစ်
တခြားပါတီ ဝင်လာဖို့ မပြောနဲ့။ သူတို့ ၃ ယောက်တင် ထိုင်ခုံလှည့်လု နေတာ မပြီးသေးဘူးးးး။
ပြည်သူ့လက်ထဲ အာဏာထည့်ပါမယ် ဆိုတဲ့ ပါတီ ကျ အရိုးများသလေး ချီးခါးသလေး ချေးများနေကြ။
အမတ်လောင်းအခြေအနေ (သြဂုတ် ၁၁ ရက် အထိ)
ကိုခိုင်ပြောဘူးတဲ့ အခြေအနေ မရောက်ပါစေနဲ့ ဆုတောင်းရတော့မယ်ထင်တယ်
ကိုသူရက.. နေသိပ်မကောင်းလို့တဲ့…။ ဝေဌုကျေ်ကို နောက်ကအကူအညီပေးနေပါတယ်..။
ပြဇာတ်က နေကြတာလား။ တကယ်လား။ မသိတော့။
. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို စိုးရိမ်တယ်။
လွှတ်တော် ခေါင်ချုပ်တောင် ဒီလို ဆွဲစေ့ လို့ ရတဲ့ အခြေအနေမျိုးဆို လွှတ်တော်ကြီးး တစ်ခုလုံးး အတွက် တွေးးရဲစရာမရှိ
ဒီချုပ်က.. ဦးရွှေမန်းကိုဆွဲစေ့ပြီး ခေါ်လိုက်ဖို့ကောင်းတယ်..။
ပွဲ က သိပ်အဆိုး ကြီး မဖြစ်သေးဘူး တော့ ထင်ရတယ်။
::::::::::: Breaking News :::::::::::
ကိုယ်စားလှယ် ရုပ်သိမ်းရေး ဥပဒေကြမ်း ကော်မရှင် ထပ်တင် By ရွှေအောင်
Donald Trump third-party run would likely kill Republicans’ 2016 …
သူဖြေထား တာတော့ သူ အခြေခံဥပဒေစာအုပ် တစ်အုပ်ကလွဲရင် ဘာမှ မဖတ် … ဆိုတော့ ဒီစာအုပ်က လည်း ဟန်ပြ … ဟ ဟ …
ဟိဟိ ..သူကြီးလဲ သတိထား ဦး ။ UK က ပုဂ္ဂို လ် က IT ကြွမ်းတော့ အဲ့ ဒီ့ ဘလောဂါတွေ ဘယ်သူဆိုတာ သတင်းပေးခဲ့တယ်ဆိုဘဲ ။။
7Day News Journal added2new photos.
Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi has announced that she will form an alliance with Shwe Mann, the ousted chairman of the governing Union Solidarity and Development Party.
ဖဘမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ သံပုရာသီးက နှစ်ခြမ်းခွဲလည်း နှစ်ခြမ်းစလုံးချဉ်တယ် ဆိုတာပဲ။ :b:
ဒဂုံ(မြောက်ပိုင်း)၌ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ၁ ဒသမ ၅ သန်း ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိ
Welcome to the THONE PWINT HSAIN Co., Ltd.
Marm Oo Khine
Peace Makers Co., Ltd., Peace Makers Co., Ltd, Everset Corporation Sdn Bhd
ထေရာဝါဒသမားတွေအတွက်.. အတွေးအခေါ်ကို.. အလွန်(အလွန်)လွှမ်းမိုးနိုင်သောစကားကြီးများအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်..။
နွား တို့ ဆိုရန် ၊ ခွင့်ရှိသည် အမှန်မှာ…
လာမယ့် (၂၀၁၆-၁၇) ပညာသင်နှစ်မှာ စတင်ပြောင်းလဲမယ့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့